Fikarohana momba ny firaisana Fiovan'ny Fivavahana, ny Nationality, ny Fahaiza-mihetsika sy ny Fitiavana eo Amin'ny Fiainana ao amin'ny Vatana Hafa - Fampidirana - Ny Fikambanana Ifanampiana
Ny porofon'ny fiverenan'ny vetaveta indray dia afaka manova ny fiarahamonina satria manaporofo izany fa afaka miova eo amin'ny fiainan'ny olona iray ny fivavahana, ny foko sy ny foko. Ny ankamaroan'ny ady sy ny fifandonana dia mifototra amin'ny fahasamihafana eo amin'ireo marika ara-kolotsaina momba ny maha-izy azy.
The Anne Frank | Barbro Karlen Ny tranga dia mampiseho amin'ny endriny io tranga io, raha nanenjika an'i Anne Frank ho Jiosy izay teraka tany Alemana, raha toa kosa i Barbro dia niorina indray tamin'ny fianakaviana kristiana Soedoà.
Ian Stevenson MD Ireo tranga koa dia mampiseho fa afaka manova ny finoana manerana ny androm-piainany ny silamo.
Ny mari-pamantarana ny fanovàna ny finoana dia lakroa ara-tsimia ao anatin'ny faribolana, izay mampiseho fa ny fivavahana dia mitovy amin'ny fanampiana ny olona hivoatra any amin'ny fanjakana ara-panahy ambony kokoa, fa tsy tokony havelantsika hizara antsika ny finoana, ny firazanana na ny firenentsika, kolontsaina amin'ny vanim-potoanan'izao tontolo izao.
Fiovàna amin'ny finoana, ny maha-firenena, ny fiaraha-monina ary ny fiaraha-monina